Maxay Tababare Gareth Southgate & Harry Maguire Ka Yiraahdeen Qaladkii Uu Xalay Ku Kacay John Stones? - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaxay Tababare Gareth Southgate & Harry Maguire Ka Yiraahdeen Qaladkii Uu Xalay Ku Kacay John Stones?
Maxay Tababare Gareth Southgate & Harry Maguire Ka Yiraahdeen Qaladkii Uu Xalay Ku Kacay John Stones?
April 1, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Gareth Southgate iyo Harry Maguire ayaa difaacay John Stones ka dib qaladkiisii kulankii ay England 2-1 kaga badisay xulka Poland iyagoo amaanay doorkii uu ka qaatay goolkii guusha iyadoo England ay sagaal dhibcood ka helay seddexdii kulan ee ay ciyaareen isreebreebka Koobka Adduunka.
England ayaa hogaanka u qabatay ciyaartii xalay ka dib rigoore uu u dhaliyay Harry Kane laakiin Poland waxay hadiyad ku heshay goolka barbaraha daqiiqadii 58aad ka dib markii uu John Stones uu kubada ku dhumiyay afka hore ee xerada goolka.
Stones ayaase qaladkiisa iska soo guday markii uu caawiye ka noqday goolkii guusha ee Harry Maguire uu dhaliyay ciyaarta oo shan daqiiqo ay ka harsan tahay.
Isagoo ka hadlayay qaladkii difaac ee uu sameeyay John Stones, Southgate ayaa u sheegay ITV Sport: “Wuxuu ku guuleystay inuu isdejiyo intii ka harsaneyd ciyaarta, wuxuuna qeyb ka ahaa goolkii guusha taasoo muhiim aheyd.
“Marka aad qalad gasho waxaa suurtogal ah inaad isku dhex yaacdo laakiin sidaasi ma uusan sameynin.
“Wuxuu ku riyaaqayaa xilli ciyaareed aad u fiican. Wuxuu sameeyay qalad caawa, wuuna ogyahay taas. Laakiin wuu ka soo kabsaday qaladkiisa intii ay ciyaarta socotay, waana inuu sidaas sii sameeyo.”
Harry Maguire ayaa isna taageeray Stones isagoo yiri: “Stones wuxuu ku riyaaqayaa sannad fiican sidaasi darteed waxaan nahay daafacyo, waxaan sameynaa qaladaad, marka aan qaladaad sameyno waxaan nahay kuwa la eedo.
“Sida iska cad wuxuu sameeyay qlaad yar laakiin wuxuu ku soo gudbay kubad madax aheyd oo fiican. Waxaan u sheegay inuu hore u sii socdo oo aan guusha heli doono, sidaas ayuuna sameeyay.
“Waxaan nahay difaacyo, mar walba qaladaad ayaan sameynaa. Dabcan ma jeclin inaan qaladaad sameyno laakiin mararka qaar goolasha waa qaladkeena, ma nihin kuwa mar walba fiican.
“John qalad yar ayaa ka dhacay caawa laakiin wuxuu u soo laaban doonaa si ka xoogan sidii hore.”